गाँजा खाएर शिवजी बन्ने भए मसानघाटमा सुतौं – || koselinews.com ||
February 24, 2017 Loksari kunwar Article, health, main_news, News 0
हिन्दु धर्मदर्शनअनुसार भगवत् शक्तिका प्रमुख तीन आयाम छन् । ती आयाम हुन्-सृजन शक्ति, पालन शक्ति र संहार शक्ति ।
संसारमा जति पनि विषय, प्राणी, जीव, कीटपतङ्ग आदि जन्मन्छन् ती सबै सृजन शक्तिका परिणाम हुन् । संसारमा जन्मिएर हुर्कने, बढ्ने र पालित-पोषित हुने काम हामी पालन शक्तिका माध्यमले गर्दछौँ । त्यस्तै, समय पुगेपछि समाप्त भएर जाने काम संहार शक्तिको प्रभाव हो ।
सृजनशक्तिलाई ब्रहृमशक्ति पनि भनिन्छ । ब्रहृमशक्तिका देवता ब्रहृमाजी हुन् । त्यस्तै पालनशक्तिका देवता भगवान् विष्णु हुन् । त्यसैअनुुुुरूप संहार वा विनाश शक्तिको नाम शिव हो । अनि संहार वा विनाश शक्तिका देवता भगवान् शिव हुन् ।
यसप्रकार ब्रहृमा, विष्णु र महेश क्रमशः सृजन्, पालन र संहार शक्तिदेवका रूपमा सदा आराध्य र पूज्य रहेका छन् ।
जो स्वयम् पीडा र कष्टहरूबाट पीडित हुन्छ, उसले कसरी अरुलाई दुःख पीडामुक्त गर्न सक्छ ? किमार्थ गर्न सक्दैन । अरुलाई नकारात्मक विषयको प्रभावबाट मुक्त गर्नका लागि उसले सबैभन्दा पहिले समस्त नकारात्मक विषयहरूलाई प्रभावहीन तुल्याउन सक्नुपर्दछ ।
भगवान् शिव सर्पको माला लगाउनुहु्न्छ, त्रिशूल हातमा लिनुहुन्छ, बाघको छाला लगाउनुहुन्छ, मसानघाटमा बस्नुहुन्छ, चिताको भष्म लेपन गर्नुहुन्छ र गोरूमाथि सवार गर्नुहुन्छ । यी सबै गर्नुपछाडिको रहस्य के हो ?
त्रिशूल अर्थात् भौतिक, आध्यात्मिक र दैविक तापबाट मुक्त हुनुपर्ने शिवको अर्को सन्देश हो । भय अर्थात् बाघले शिवलाई हानी गर्न सक्दैन, सेवा गर्छ । बाघलाई अर्थात् भयलाई जितेर त्यसमाथि शासन गर्न सक्ने हो भने मात्र जीवन सुखमय हुनसक्छ भन्नु भगवान् शिवले बाघको छाला धारण गर्नुको अर्को अर्थ हो ।
महापुरूषहरू अपार दयालु हुन्छन् । अर्काका दुःख, पीर र कष्टरूपी हलाहल स्वयम्ले पान गरी उनीहरूलाई दुःखमुक्त गर्नुपर्छ भन्नु शिवको विषपानको रहस्य हो । उहाँको यही अपार दयाको यश क्षितिज पारिपारि पुगेर नीलकण्ठका नाममा उहाँ सर्वव्यापक र सर्वपूज्य बन्नुहुन्छ ।
भगवानले नै यी विष, भाङ र धतुरोलाई सेवन गर्न सक्छन् । किनभने, उनी नै यी विषहरू पनि पचाउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछन् । जसलाई यी विषले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैनन्, ती नै भगवान् हुन् ।
धर्तीलाई पनि भगवान् मानिन्छ किनकि यही धर्तीमा नै यी समस्त विष र भाङहरू फुल्छन्, फक्रन्छन् र फल्छन् ।
शिवले ती समस्त विषहरूलाई पचाइदिनुहुन्छ, किनकि उहाँसँग त्यो सामर्थ्य छ । अमृत र विषको विभेद धर्तीले कहिल्यै गर्दैन । भगवान् शिवलाई विषको कुनै प्रभाव पर्दैन ।
भूत, प्रेत, पिशाच शिवका गण हुन् । तर, भगवान् शिव यी सबै अमङ्गलहरूलाई दास बनाएर तिनलाई पनि कल्याणकै लागि प्रयोगमा ल्याउने हैसियत राख्नुहुन्छ ।
हामीले एकपटक सोच्ने कि ?
शिवरात्रीका बेलामा गाँजा, चरेस, भाङ र धतुरो खाएर हामीले सबैको कल्याण गरेका छौँ कि छैनौँ ? एकछिन सोचौँ ।
हामी सामान्य मनुष्य हौँ । त्यसैले, हामी शिवले गरेका असाधारण कामका लायक छैनौँ । हाम्रो शरीर, शौर्य र शक्ति नै ती तमाम कृत्यका लायक छैनन् । भगवान् शिवका चरित्रले दिने सन्देशलाई प्रतीकरूपमा ग्रहण गर्नु नै हाम्रो एक मात्र कर्तव्य हो ।
शिवलाई प्रसन्न बनाउन गाँजा र भाङ खानेहरूले कहिल्यै आफूलाई प्रशन्न राख्न सक्दैनन् । यदि हामी स्वयम् प्रसन्न छौँ भने शिव कहिल्यै दुःखी हुन सक्नुहुन्न ।
तर, हामी शिवरात्रीलाई दुर्व्यसनको पर्वबाहेक केही बनाउन सकेनौँ । शिवरात्रीमा खाएको गाँजा र चरेसको नशामा सम्पूर्ण चैतन्य गुमाएर हामीले शिवको पूजा होइन, अपमान गरिरहेका छौँ ।
शिवरात्री त चैतन्यको विशेष पर्व हो, कल्याण र आध्यात्मिक मूल्यको खोजी गर्ने पर्व हो । आफूलाई भगवान् शिवको समकक्षमा राखेर गाँजा र भाङ खाँदै जथाभावी गर्ने पर्व होइन ।
संसारमा फोहोरलाई ग्रहण गर्ने कोही त हुनु पर्‍यो नि ! हामी पो फोहोरलाई केवल फोहोर देख्छौँ, दोषलाई दोषसिवाय केही देख्दैनौँ । तर, प्रकृति नित्य दोषहरूलाई पनि गुण बनाउने महाअभियानमा मस्त छ । हामी पो अरुको दुःखमा खुसी र प्रसन्न हुन्छौँ । तर, प्रकृति त सबैका लागि बाँच्नु छ । किन हामी विषलाई पनि जगतको कल्याणका निम्ति स्वीकार्ने शिवसँग दुव्र्यसनको लतमा जीवनलाई बर्बाद गर्ने आफूसँग तुलना गर्न लाज मान्दैनौँ ? मान्छे त परमको एउटा अंश हो, तर शिव सृष्टि र विनाशका मूल हुन् ।
तर, आजको मान्छे खान, बस्न, शौचालय जान, बोल्न र हिँड्न पनि राम्ररी जान्दैन । जीवनयापनका यी सामान्य नियममा समेत नियमित हुन नसक्ने र अनुशासनको निरन्तर उल्लङ्घन गर्ने लत बसेका हामीले सृष्टिका मूल शिवसँग आफूलाई दाँज्नुदैवीशक्तिको अवमूल्यन् र आफ्नो कमजोर अहम्को प्रदर्शनसिवाय अरु केही हुन सक्दैन ।
यसर्थ, भगवान् शिवको जीवनलीला र त्यसको महारहस्यको बोध गरौँ । भगवान् शिवको चरित्रमा देखिएका प्रतीक र सन्देशलाई प्रत्यक्ष आत्मसात् गरी कल्याणको दुर्लभतम् जीवन बाँच्ने प्रयत्न गरौँ ।
भगवान् शिवको स्मरणको अर्थ सानातिना गल्तीलाई सजिलै भुलेर केटाकेटीजस्तै प्रशन्न रहनु, दोषहरूलाई जित्नु र तिनलाई पनि जगत् कल्याणका लागि प्रयोगमा ल्याउन प्रयत्नरत रहुनु हो । यसो भयो भने सम्भवतः शिवरात्री मनाउनु र भगवान् शिवको स्मरण गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दछ । अनलाइनखबरबाट